Ifafaalaha adduunka ugu halista badan ayaa laga furay Switzerland | RayHaber | raillynews
HomeDUNIDAYURUB41 SwitzerlandXaaladda ugu weyn ee dunida ayaa laga furay gudaha Switzerland
18 / 12 / 2017 41 Switzerland, YURUB, DUNIDA, tareenka, Tariin, GUUD, KENTİÇİ Systems Rail
Schwyz-Stoos, nidaamka sayniska adduunka ee ugu hooseeya aduunka ayaa ku qarash gareeyey 53 million oo dhismo ah oo ku yaala Switzerland, Axaddii. 1738 waa 'wax yaabaha casriga ah ee casriga' ee indhaha dhuxusha.
Nidaamka ugu caansan ee caalamka ayaa laga furay gudaha Switzerland. Nidaamka dabiiciga ah ee Schwyz-Stoos, oo dhisay tuulada Stoos ee kuyaala gobolka Schwyz, ayaa loo tixgeliyaa in la yaab leh injineernimada casriga ah.
53 ayaa ku kacaya $ million oo ah nidaamka tareenada tareenka, kaas oo bixiya khibrad 'safar meeshi' ah oo leh naqshadeeda. Rakaabka waxay gaari karaan dhererka mitirka 1738 daqiiqadaha min biriijka xadiidka tareenka sare ee 743. Gawaarida waxyeellada, kaas oo ku xiri doona Alps xawaare ah mitirka 4 halkii labaad, waxaa loogu talagalay sidii foosto.
Iyadoo tixgelinaysa in tuulada Stoos ay tahay mitirka 1300 oo ka sarreeya heerka badda, tareenkaan tareenku wuxuu noqonayaa waayo-aragnimo xiiso leh dadka reer Swiss iyo dalxiisayaasha. 50 oo ku taal koonfurta magaalada caasimadda Zurich, tuulada ayaa leh dad ku dhow xNUMX.
Ogeysiiska Qandaraaska: Mashiinka Cirifka Qulqulka Meelaha Qalabka ee CNC (TUDEMSAS)
Kusoo kicinta ski-galka ee Switzerland
Shil gaari oo ku geeriyooday Switzerland: 2 dhintay (Video)
Shirkadda Isgaadhsiinta ee Swiss waxay ku eedeysay Apple in isticmaalka aan sharciyeysneyn ee icon saacad
Dhibaatada ka dhaxaysa Apple iyo Tareenada Federaalka ee Federaalka!
Miyuu Apple bixiyay 21 Milyan oo Dollar oo loo siiyay Swiss Railways?
Apple ma bixisay 21 Milyan oo Dollar oo ku socota Swiss Railways?